Zimbabwe confirm tour to Pakistan in May - Cricket365
Home News Zimbabwe confirm tour to Pakistan in May
Zimbabwe confirm tour to Pakistan in May
Zimbabwe have confirmed they will become the first Full Member cricket nation to tour Pakistan since 2009 when militant groups attacked the Sri Lanka team bus leaving five members of the team injured while six security guards and two civilians were killed.
Since that incident Pakistan have been forced to play all their home matches in the United Arab Emirates as opposing teams did not feel safe to travel to the Asion country.
However after successful meetings, which started at the recently concluded World Cup, Zimbabwe seem to be happy with the security situation and will play two T20 Internationals and three ODI's sometime in May.
Zimbabwe Cricket chairman Wilson Manase said on twitter: "I can confirm that @ZimCricketv will tour @TheRealPCB in May. We have taken cognisance of all the factors for us to arrive at this decision, so let's not be alarmist about the situation in Pakistan."
According to Zimbabwe Cricket Alistair Campbell chairman Pakistan will tour Zimbabwe in August as part of the agreement that will see the African country play all their matches in the city of Lahore.
Campbell was quoted as saying on ZC's twitter account: "We are touring Pakistan as a measure of establishing bilateral relations between us and them. They will also come to Zimbabwe in August."